Home AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị na-egwu egwuregwu bọọlụ Argentine Rodrigo De Paul Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu Akụkọ
Anyị Rodrigo De Paul Biography na-egosipụta Eziokwu gbasara Akụkọ nwata ya, Ndụ mbido, Ezinụlọ, Ndị nne na nna (Monica De Paul), Nwanyị nwanyị (Camilla Homs), Ndụ Nke Onwe, Ndụ, na Net Worth.
N’ikwu ya n’ụzọ dị mfe, anyị na-ewetara gị njem ndụ ya, site na mgbe ọ bụ nwata rue mgbe ọ ghọrọ onye a ma ama. Iji mee ka agụụ gụkwuo gị, nke a bụ oge ọ bụ nwata ruo na ọ ga - abụ okenye - nchịkọta zuru oke nke Rodrigo De Paul Bio.
Nchịkọta foto nke Rodrigo De Paul's biography. Lee akụkọ ndụ ya na mbili.
Ee, anyị niile maara na ogologo njem ya na 2021 Copa America mechara mezie Angel di Maria iji nweta ihe mgbaru ọsọ mmeri maka Argentina. N'ihi ya, ọ ghọrọ onye nkwado dị mkpa na mba ya, na-emeri aha ahụ na nke mbụ ya kemgbe 1993.
N'ụzọ dị mwute, ọtụtụ ndị na-agba bọl bọọlụ maara naanị ole na ole gbasara otu n'ime kpakpando 5 breakout nke 2021 Copa America. Anyị akwadebela otu mpempe akwụkwọ dị mkpirikpi nke ederede ya, nke ị ga-ahụ ihe na-atọ ụtọ. N’atughi nnukwu nsogbu, ka anyi bido.
Rodrigo De Paul Childhood Akụkọ:
Maka ndị na-anụ Autobiography, aha ya bụ 'Lechuga'. Rodrigo Javier de Paul a mụrụ na 24th ụbọchị nke May 1994 nne ya, Monica De Paul, na nna ya a na-amaghị aha n'obodo Sarandí, Argentina.
Ndị na - agba ọsọ bọọlụ bụ ọdụdụ nwa n’ime ụmụaka atọ amụrụ site na njikọ dị n’etiti ndị mụrụ ya. Gaghị ekweta ya! Nne ya dị afọ 60 ka dị ka onye nọ na mbido 40s. Lee ya ọmarịcha foto n'okpuru na-ekpe ikpe maka onwe gị.
Zute otu nne na nna ya, Monica De Paul. N'ezie, o ketara ịma mma nke ihu ọchị ya.
Kemgbe ọtụtụ afọ, ọtụtụ ụmụaka ewerela football dị ka ụzọ mgbapụ si ịda ogbenye na Argentina, na Rodrigo bụ otu n'ime ha. Ọ bụ naanị 3 mgbe bọl na-agba ya ara.
Dị ka a tụrụ anya, nwatakịrị ahụ malitere njem ya site na iso ndị enyi ya gbaa bọl n'okporo ámá. A na-amanye ya ka ọ kpọọ dị ka onye na-eche nche - ọnọdụ ọ kpọrọ asị nke ukwuu n'oge ọ bụ nwata. Ma, o mechara gbanwee ịbụ onye na-eche nche na-egwu egwu na midfield.
A zụlitere De Paul na ụmụnne ya abụọ, Damian na Guido De Paul, n'obodo a mụrụ ya. Mgbe ọ bụ nwatakịrị, ọ nọrọ ọtụtụ awa ọzụzụ n'okpuru nlekọta nke nna nna ya (Osvaldo).
N'oge ahụ, nne ya na-arụsi ọrụ ike mgbe niile ma ọ nweghị oge iji kuru nwa okoro ahụ gaa n'ọhịa. N'ihi ya, nna nna ya bịara ma hụ na De Paul natara ọzụzụ kachasị mma ọ ga-enweta na pitch.
Foto nloghachi nke oge nne na nna ya ochie.
Rodrigo De Paul Ezigbo Ezinụlọ:
N'ebe nna ya na-anọghị, nne nke Midfield ahụ ga-arụsi ọrụ ike iji lekọta anya ya. Ọ bụ nwanyị siri ike nke gụrụ ezigbo akwụkwọ gbasara ego. Site na ego ya, ezinụlọ De paul mere nke ọma dịka ezinụlọ niile.
N'ụzọ na-akpali mmasị, onye ọ bụla so na ya jikọtara njikọ siri ike nke na-enyere ha aka ịdabere na ibe ha. Ikekwe ihe nzuzo dị ndụ ha na akụ na ụba dara ogbenye nke Argentina bụ njikọta na afọ ojuju ha.
Rodrigo De Paul Ezinụlọ:
Ndị na-agba ọsọ sitere na obodo a maara nke ọma maka ụlọ ọrụ akpụkpọ anụ ya na usoro tanning. Ebe obibi ya nwetara mmetọ nke ọrụ ụlọ ọrụ ha rụpụtara.
Agbanyeghị, De Paul ka bụ nwa amaala obodo ya na nwa amaala obodo Sarandi. N'obodo ya (Sarandi) bụ naanị nkeji iri na abụọ gaa Lanus, ebe akụkọ akụkọ Argentine (Diego Maradona) mụrụ.
Map a na-egosi ógbè (Buenos Aires) ebe obodo ya (Sarandi) di.
Rodrigo De Paul Mmụta:
Mgbe anyị na-enyocha ihe dị iche iche gbasara akụkọ ndụ ya, anyị ghọtara na ihe niile gbara ndụ ya gburugburu kemgbe ọ bụ nwata bụ bọọlụ. Kama ikwu banyere ahụmịhe mmụta ya, De Paul họọrọ ikpughere eziokwu banyere egwuregwu bọọlụ ya.
Agbanyeghị na ekwutụghị ma ọ gaa ụlọ akwụkwọ ọ bụla, anyị na-eche na nne na nna ya ga-emerịrị ka ọ gụrụ akwụkwọ.
Rodrigo De Paul Football Akụkọ nke:
Ọ bụ nrọ nke nwatakịrị ọ bụla nọ na Argentina na-eme nke ọma na bọlbụ ma gbanahụ akụ na ụba ya dara ogbenye. N'ihi ya, nwatakịrị nwoke ahụ nwere mmasị n'ịgba bọl na ndị ọgbọ ya.
Dịka e kwuru na mbụ, ọ malitere dị ka onye na-eche nche ma ọ dịghị adịgide n'ọkwá ahụ. N'ikpeazụ, Rodrigo si n'azụ wee kpọọ dị ka onye na-eme egwuregwu maka ndị otu ya.
Ọ naghị ewe oge tupu nna nna ya achọpụta na ọ kachasị mma ka ọ sonye na agụmakwụkwọ. N'ihi ya, o debara aha 8 afọ Rodrigo na ntọala ndị ntorobịa nke Racing na 2002.
O nwere ike iyi obere obere, mana ọ bụ nwata nwere mmetụta na ọkwa agụmakwụkwọ ntorobịa ya.
Rodrigo De Paul Ndụ Ndụ Mmalite:
Midfielder Onye midfielder nwere nkà nọrọ afọ iri dị ka obere na ntorobịa ntorobịa ya. N'oge ndị ahụ, ọ gafere ọzụzụ siri ike ma rụọ ọrụ nke ọma n'ọtụtụ egwuregwu.
N'ụzọ ụfọdụ, ọ karịrị ọtụtụ ndị egwuregwu n'ọtụtụ egwuregwu.
O were ya nnukwu ndidi tupu ya anata oku mbụ ya na ndị agha na 2012. Ma ọzọ, ọ nọgidere na-anọchi anya ya ma ghara ịrụ ọrụ ọ bụla ruo mgbe February 2013.
N'ime oge 54 ọhụụ ọhụụ maka Racing Club, Rodrigo nwetara naanị ihe mgbaru ọsọ 6. Nke ahụ egbochighị ndị na-agụ akwụkwọ ka ha gosipụta ikike ọ na-arụ n'egwuregwu ya.
Rodrigo De Paul Biography - Tozọ Na-ewu ewu Akụkọ:
N'oge ụbọchị ya na ndị ọkachamara nke Argentine, onye dribbler rọrọ oge nke ọ ga-enwe ihe ịga nke ọma dị ka Paul Dybala na Erik Lamela.
N'ụzọ dị mma, nrọ ya ghọrọ eziokwu ka ọ sonyeere Valencia maka nkwekọrịta 5 afọ ruru US $ 6.5 nde na 2014.
Rig Rodrigo na-egwuri egwu naanị otu nkeji tupu eziga ya na pitch maka imebi Aleix Vidal na mbido La Liga ya.
Ncheta ncheta nke mmalite ya na La Liga.
N'ikpeazụ, o gosipụtara ọchịchị ya na midfield maka ụlọ ọgbakọ Spanish ya. Agbanyeghị, ihe kachasị mma adịghị mma maka otu ahụ ka ezigara ya na klọb mbụ ya na February 2016.
Rodrigo De Paul Biography - Akụkọ nke Successga nke Ọma:
Onye na-egwu egwuregwu ahụ n'oge na-adịghị anya sonyeere Njikọ astali ka e zigara ya na Udinese na July 2016. N'ebe ahụ, ọ malitere ịmalite traction mgbe ya na ndị na-amasị ya Papu Gomez na Lautaro Martinez.
O were obere oge tupu Rodrigo gosipụta onwe ya dị ka ọla n'etiti ndị egwuregwu pụrụ iche nke Udinese. Ọbụna ọ ghọrọ onye nchịkwa kachasị goolu nke otu ya na oge 2018-19. N'okpuru ebe a bụ vidiyo na-egosipụta ụfọdụ ihe ngosi dị egwu nke arụmọrụ ya na klọb.
Onyinye Argentina 2021 Copa America merie:
Ka ọ na-aga n'ihu ịmasị ndị fan, a kpọrọ ya ka ọ kpọọ Argentina maka 2021 Copa America. N'oge ngwụcha, De Paul nyere ogologo njem mara mma nke nyere ohere maka Angel di Maria iji nweta akara mmeri.
N'oge ahụ dị ebube, ụwa tụrụ egwu nke onye ọkpụkpọ dị ala, onye ndị Fans gosipụtara ozugbo na ọkwa nke ndị ọkachamara. Mauro Icardi. Imeri Copa America ghọrọ otu n'ime ihe ịga nke ọma ọ na-arụ nke ọma na akụkọ ndụ ya.
Oge kachasị ebube dị ugbu a n'ọrụ ya dị ka nke July 2021.
Ọpụrụiche De Paul nwere mmasị ngwa ngwa Diego Simeone, onye mere njem iji chebe ya na ihe agha nke Atletico Madrid. Mgbe ndụmọdụ kwesịrị ekwesị, ọ bịanyere aka na ụlọ ọrụ Spanish maka nde afọ 35 na July 5. Ndị ọzọ, dị ka ha na-ekwu, bụ akụkọ ihe mere eme.
Rodrigo De Paul Nwanyị:
Inwe ike ịchọta onye ị pịrị wee kee ya bụ mmetụta kachasị mma. N'ihe banyere De Paul, otu onye mere ka obi ruo ya ala bụ enyi ya nwanyị, Camilla Homs. Ọ bụ nkọwa nke mkpụrụ obi ya.
Nke a bụ foto nke De Paul na enyi ya nwanyị, Camilla Homs, N'ezie, ha na-eme di na nwunye zuru oke.
Ọ ga-amasị gị ịmata na onye dribbler ahụ ejirila ụzọ ndị yiri ya Lionel Messi. Ee, ya na otu onye ya na ya rapara kemgbe ọ bụ nwata ruo n'oge ọ ghọrọ onye ama ama.
Ọbụna mgbe ogologo oge gasịrị, ịhụnanya ya maka Camilla Homs akwụsịghị ịma mma ya. N'ezie, De Paul na enyi ya nwanyị nọgidere na-azụlite ọtụtụ ncheta obi ụtọ. Ugboro ugboro, anyị ahụla onye ọ na-akwado ya na-akwado ya site n'akụkụ.
Rodrigo De Paul Childrenmụaka:
Dika mmekọrịta ha na-adigide na-adigide oge, di na nwunye a nwere ihe nketa ugbu a iji kwado akụkọ ịhụnanya ha. Ha niile mụrụ nwa na 2019 wee gụọ ya Francesca.
Hụ otu nwa ya nwanyị (Francesca) si maa mma. Ama m na ị gaghị enwe ike iwepụ anya gị!
Dị ka onye na-egwu egwuregwu ahụ si kwuo, ịdị adị nke nwa ya nwanyị agbanweela ndụ ya n'ụzọ dị mma. Obi tọgburu ya atọgbu ma tụta ọrụ dịịrị ndị nne na nna kemgbe ọ bịara. Lee oge obi uto nke De Paul na ndi ezin ul o ya.
Rodrigo De Paul Ndụ Nke Onwe:
Eleghị anya ịmara onye dribbler ahụ mgbe ị hụrụ ya ka ọ gosipụtara ihe ngosi pụtara ìhè na Copa America. Mgbe ị hụrụ ya site na ọrụ ọrụ, ị nwere ike ịchọ ihe ndị ọzọ gbasara ya n'èzí football.
Nke mbu, onye ya bu ngwakọta nke agwa Gemini zodiac. Ọ bụ onye nwere ọgụgụ isi, onye na-achọ ịmata ihe, na onye na-eche echiche nke ọma. N'ezie, De Paul nwere oge ọ bụla naanị ya mgbe ọ na-eche maka njem ya ogologo ndụ.
Eziokwu ọzọ banyere ya bụ na ọ na-enwe mmasị na-ekiri egwuregwu tennis ahịhịa. Moreso, ọ bụ otu n'ime ihe omume ntụrụndụ ya kachasị amasị, nke ọ hụrụ n'anya igwu egwu mgbe ọ bụla enwere ihe ùgwù.
ọ na-etinye ụfọdụ oge ya n'efu na-amụta otu esi egwu tennis.
Ezigbo Ndụ Rodrigo De Paul:
Kama ikpughe ya n'ihu ọha ụgbọ ala ya mara mma na nnukwu ụlọ dị ka Nicolas Otamendi, onye na-egwu egwu na-ahọrọ igosipụta nkọwa nke ndụ ezumike ya.
Eziokwu bụ, De Paul na-etinye oge ka ukwuu n'oge ezumike ya ịga leta osimiri naanị ya ma ọ bụ ndị ezinụlọ ya. Ọ na-ewere ya dị ka ụzọ isi nwetaghachi ike ya. N'oge ụfọdụ, ọ na-ede foto dị iche iche na-akpali akpali nke ncheta o mere n'ụsọ osimiri.
Oge pụrụ iche ya na ezinụlọ ya. N'ezie, ịmụmụ ọnụ ọchị ya na-egosi otú ọ ga-esi jiri ihe ncheta a kpọrọ ihe.
Inwe ezinulo na-enye nkwado nke na-elebara ọdịmma ya anya bụ otu n'ime ngọzi kasịnụ nke ndụ ya.
N'ezie, ndị Fans agaghị ama ya ma ọ bụrụ na ndị mụrụ ya (ọkachasị nne ya) adaghị n'akụkụ ya n'ịchụso ọrụ ya. N'ihi ya, anyị na-ewetara gị ụfọdụ eziokwu gbasara onye ọ bụla nọ n'ezinụlọ ya.
Banyere Rodrigo De Paul Nna:
Maka ụfọdụ ihe a na-akọwaghị, kpakpando Argentine ahụ akpọghị aha nna ya kemgbe ọ ghọrọ onye a ma ama. Ikekwe, ọ bụghị ihe ndabara dị ka Sergio Aguero, onye nwere mmasị n'ilekọta nna ya.
Banyere Rodrigo De Paul's Mother:
A na-ekwukarị, mgbe nwatakịrị gị nke kachasị nta ghọrọ onye a ma ama ma nwee ihe ịga nke ọma, ọrụ gị dị ka mama gafere. N'otu aka ahụ, nne De Paul edetụla ahụ efe nke ịzụlite nwa ọ mụrụ na nwa ka ọ gaa nke ọma.
Dịka e kwuru na mbụ na akụkọ ndụ a, aha ya bụ Monica De Paul. Ọ na-arụsi ọrụ ike iji kwado ezinụlọ ya dum.
Zute nne ya, Monica De Paul. Nwere ike ịgwa ya na ọ bụ nọmba 1 ya.
Onweghi oge nwa ya nwoke chọrọ nkwado ya na ọ gaghị enweta ya. Ọ bụ nwanyị siri ike nke na-aga n'ihu karịa iji nyere ụmụ ya aka ime nke ọma na mbọ ha. N'agbanyeghị nrụgide niile nke ịrụsi ọrụ ike, Monica De Paul ka dị obere ma mara mma.
Banyere ụmụnne Rodrigo De Paul:
Inwe ụmụnne nwoke ndị okenye abụọ nke ọ na-adaberekarị maka nkwado na-eme ka nwata ya bụrụ ihe ịtụnanya. Aha ha bụ Damian na Guido De Paul. Ọ bụ ezie na ha abụghị ndị a ma ama dịka nwanne ha nwoke, onye ọ bụla n'ime ha na-eme nke ọma n'ọrụ ha.
Ya na ụmụnne ya enweela obi ụtọ mgbe niile, Damian na Guido De Paul.
N'otu n'ime akwụkwọ ozi De Paul, ọ kwetara na ụmụnne ya enweela mmetụta na njem ndụ ya. N'ezie, ha bụ ihe kpatara na ọ naghị eche echiche ịhapụ nrọ ya.
Banyere ndị ezinụlọ Rodrigo De Paul:
Eleghi anya ị maghị na onye ọkpụkpọ egwu nwere ọtụtụ oge ọ bụ nwata yana ezinụlọ ya. Dịka anyị kwurula, ọ natara ọzụzụ izizi bọọlụ site na nna nna ya, Osvaldo.
Otu eziokwu na-adọrọ adọrọ karị bụ na nne nne ya na-esokwa ha n'ọdụ ụgbọ ala iji kirie ọzụzụ ha.
N'ụzọ dị mwute, nna nna De Paul anaghị ele nwa obere enyi ya anya ka ọ bụrụ ọkachamara. Ọ nwụrụ (na 2009) ihe dị ka afọ atọ tupu nwa nwa ya enwee ike idekọ nnukwu ihe ịga nke ọma na bọl.
Mgbe agadi nwoke ya nwụrụ, nne nne ya gara na-arụ ọrụ di ya nwụrụ nwụrụ. Ọ dị nso na De Paul ma nwee mmasị ịgba ya ume mgbe niile n'ihe ọ na-eme.
Nke a bụ otú o si echekwa oge obi ụtọ niile ya na nne nne ya nọ.
Rodrigo De Paul Eziokwu Eziokwu:
Iji mechie akụkọ ndụ anyị banyere onye na-egwu egwu egwu, lee ihe ndị na-akpali akpali ga-enyere gị aka ịghọta akụkọ ndụ ya nke ọma.
Anyị niile maara na bọl enyela ọtụtụ ndị na-eme egwuregwu nnukwu akụnụba, De Paul apụghịkwa. Ka m na-achịkọta akụkọ ndụ a, ọ kpakọbara atụmatụ Net Net nke € 8 Million.
Tupu ịkwaga Atletico Madrid, onye egwuregwu a ma ama na-akwụ ụgwọ ụgwọ kwa afọ nke € 1.87 nde na Udinese. Ekpughebeghị ụgwọ ọnwa ya na klọb ya.
Rodrigo De Paul Salary (Na Peso nke Argentina)
Kwa Afọ: Pesos 207,134,242 (ARS)
Ọnwa kwa: Pesos 17,261,186 (ARS)
Kwa Izu: Pesos 3,977,232 (ARS)
Kwa :bọchị: Pesos 568,176 (ARS)
Kwa elekere: Pesos 23,674 (ARS)
Kwa Nkeji Pesos 394 (ARS)
Sekọnd ọ bụla: Pesos 6.5 (ARS)
Ọ ga-amasị gị ịmara na otu nwa amaala Argentine ga-arụ ọrụ maka afọ 32 iji mee ihe ọ ga-enweta na otu ọnwa na Udinese.
Anyị emeela atụmatụ nke ọma gbasara ụgwọ ọnwa De Paul ka elekere na-akụ. Lee ego ole ọ ritere kemgbe ị bịara ebe a.
Ebe ọ bụ na ị malitere ilele Rodrigo's Bio, nke a bụ ihe ọ kpatara.
ego $ (ARS) 0
Eziokwu # 2: Rodrigo De Paul Tattoos:
Onye Argentine na-ele ahụ ya anya dị ka ngwá ọrụ zuru oke iji dekọọ ihe ịga nke ọma nke njem ọrụ ya. Moreso, o tinyela ọtụtụ akara na ahụ ya nke na-akọwa ihe ọ rụzuru na ndị kpaliri ya imezu ha.
Okike ya nke gunyere; aha ada ya, nne-nne ya, nna nna ya, na nne ya. O mejuputara ụbọchị nke egwuregwu mbụ ya na Argentina, eserese nwata ya, na ọdụm mara mma nke ọma.
Lelee egbugbu mara mma nke akara ọ nwere na ahụ ya.
Echere m na agaghị m akwụsị inking ọ gwụla ma m bụrụ onye mmeri ụwa. Ọ bụrụ otú ahụ, m ga-egbu egbugbu nke iko mba ụwa n'obi m! ”
Eziokwu # 3: Rodrigo De Paul Okpukpe:
You Ọ bụ n'etiti 62.9% nke Ndị Kraịst nọ na Argentina na-ekpe Katọlik. N'ezie, a mụrụ De Paul ma tolite na ụlọ Ndị Kraịst.
Ọ bụ ụkpụrụ mgbe niile maka nne ya na nne na nna ya iyi Rosary ebe ọ bụla ha na-aga yana ọbụlagodi mgbe ị na-ese foto. Nnukwu nsọpụrụ ha dị ka ndị Katọlik rutere ụmụ ha ma nyere ha aka ịchọta akụkụ ha n'ihe metụtara okpukpe.
Eziokwu # 4: Ihe omume dị n'etiti De Paul na Messi Mgbe Copa America merie:
Ka ndi otu ndi Ajentina dum na-agu egwu mmeri, onye nwere ikike dribbler gbaliri bulie abu nke gha emo Brazil (mba a nabatara)
Ma, onyeisi ya Lionel Messi bịara ma gbochie ya ịgụ egwu megide Brazil. Nke a bụ vidiyo na-egosi etu ọnọdụ ahụ niile siri mee.
Eziokwu # 5: FIFA stats:
Dika ntule 2021 ya, De Paul ka nwere otutu uzo ya ga - agha tupu o ruru ndi di nma Giovani Jiri Celso. O nweela ezigbo nkà nke mere ka ọ bụrụ onye ọkpụkpọ egwu egwu. Otú ọ dị, ọ ga-achọ ịrụ ọrụ na ebumnuche ya na-emetụta ikike na ike ya.
Ọ nwere akụkọ ịtụnanya, enweghị obi abụọ banyere ya.
Tebụl dị n'okpuru na-ekpughe ozi dị nkenke banyere Rodrigo De Paul. Ọ na - enye gị ikike ịmegharị site na profaịlụ ya ngwa ngwa o kwere mee.
Aha n'uju: Rodrigo Javier de Paul
aha otutu: Rodrigo
Ụbọchị ọmụmụ: Thbọchị 24 nke Mee 1994
Ebe amụrụ onye: Sarandí, Ajentina
Nne: Monica De Paul
Ụmụnne: Damian na Guido De Paul (ụmụnna)
Nwa nwanyi: Camilla Homs kwuru
Children: Francesca (ada)
Ezigbo Net: 8 Nde (2021 Ọnọdụ)
Rygwọ ọnwa kwa afọ: 1.87 nde (ya na Udinese)
N'ikpeazụ, ọ dị anyị mkpa ịkele nne nne na nne na nna ochie nke Paul maka ịkwado ya site na njem njem ya. Ọ dịbeghị ụbọchị ọ na-enweghị ekele maka ezinụlọ ya maka inyere ya aka imezu agụụ nwata.
Daalụ maka ịgụ akwụkwọ anyị na-arụ nke Rodrigo De Paul Biography. Jiri obiọma kọọrọ anyị echiche gị banyere onyinye ya nye ndị otu mba Argentina na ngalaba nkọwa dị n'okpuru.